Samuel Nhoma A Ɛto So Abien 11:1-27
Dawid ne Bat-Seba sɛee aware (1-13)
Dawid ma wokum Uria (14-25)
Dawid waree Bat-Seba (26, 27)
11 Afe no mfiase* a ahemfo taa kɔ ɔko no, Dawid somaa Yoab ne ne nkoa ne Israel asraafo nyinaa sɛ wonkokunkum Ammonfo, na wokotwaa Raba ho hyiae.+ Dawid de, ɔtenaa Yerusalem.+ 2 Da koro anwummere,* Dawid sɔre fii ne mpa so na ɔkɔnantenantew ahemfi* no atifi. Bere a ɔwɔ ɔdan no atifi no, ohui sɛ ɔbea bi reguare, na na ɔbea no ho yɛ fɛ yiye. 3 Dawid somaa obi sɛ onkobisa ɔbea no ase, na ɔbɛkae sɛ: “Ɔyɛ Eliam*+ ba Bat-Seba,+ na ɔware Hitini+ Uria.”+ 4 Ɛnna Dawid somaa nkurɔfo sɛ wɔnkɔfa no mmra.+ Enti ɔbea no baa ne nkyɛn, na ɔne no dae.+ (Saa bere no, na ɔbea no ho ntew,* enti na ɔredwira ne ho.)+ Ɛno akyi no, ɔsan kɔɔ ne fi. 5 Ɔbea no nyinsɛnee, na ɔde nkra kɔmaa Dawid sɛ: “Manyinsɛn.” 6 Ɛbaa saa no, Dawid soma kɔɔ Yoab hɔ kɔka kyerɛɛ no sɛ: “Ma Hitini Uria mmra me nkyɛn.” Enti Yoab maa Uria kɔɔ Dawid nkyɛn. 7 Bere a Uria duu Dawid nkyɛn no, obisaa no sɛnea Yoab ne dɔm no ho te, ne sɛnea ɔko no rekɔ. 8 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ Uria sɛ: “Kɔ wo fi na kɔhome.”* Bere a Uria fii ahemfi hɔ kɔe no, wɔde ɔhene akyɛde* toaa no. 9 Nanso Uria ankɔ ne fi; ɔne ne wura nkoa a aka no nyinaa kɔdaa ahemfi pon ano. 10 Enti wɔka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Uria ankɔ ne fi.” Ɛnna Dawid bisaa Uria sɛ: “Ɛnyɛ akwantu mu na wufi bae? Adɛn nti na woankɔ wo fi?” 11 Uria ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Apata ase na Adaka no+ ne Israelfo ne Yudafo wɔ, na me wura Yoab ne me wura nkoa akɔsoɛ wuram. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ mekɔ me fi kodidi nom, na me ne me yere da?+ Sɛ́ wote ase na nkwa* wɔ wo mu yi, merenyɛ saa!” 12 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ Uria sɛ: “Tena ha nnɛ nso, na ɔkyena megya wo kwan ama woakɔ.” Enti Uria tenaa Yerusalem saa da no ne n’adekyee. 13 Afei Dawid soma kɔfrɛɛ no ma obedidi nomee wɔ n’anim, na ɔma ɔbowee. Nanso anwummere no, wankɔ ne fi. Ofii hɔ ne ne wura nkoa kɔdae. 14 Ade kyee anɔpa no, Dawid kyerɛw krataa de hyɛɛ Uria nsam sɛ ɔmfa nkɔma Yoab. 15 Ɔkyerɛwee wɔ krataa no mu sɛ: “Momma Uria nkogyina faako a ɔko no mu yɛ den paa, na montwe mo ho mfi n’akyi, na wonkum no.”+ 16 Saa bere no, na Yoab ne n’asraafo atwa kurow no ho ahyia, na ɔmaa Uria kogyinaa faako a onim sɛ atamfo no ho yɛ den paa no. 17 Bere a kurow no mu mmarima fii adi ne Yoab bɛkoe no, Dawid nkoa no bi wuwui, na Hitini Uria nso wui.+ 18 Ɛnna Yoab kɔkaa ɔko no mu nsɛm nyinaa kyerɛɛ Dawid. 19 Ɔka kyerɛɛ ɔbɔfo a ɔsomaa no no sɛ: “Sɛ woka ɔko no mu nsɛm nyinaa kyerɛ ɔhene wie a, 20 ebia ɔhene bo befuw na wabisa wo sɛ, ‘Adɛn nti na mobɛn kurow no saa kɔkoe? Ná munnim sɛ wobegyina ɔfasu no so atotow agyan awowɔ mo anaa? 21 Hena na okum Yerubeset+ ba Abimelek?+ Ɛnyɛ ɔbea na ɔtow ɔbo a wɔde yam ade fii ɔfasu no so bɔɔ no kum no wɔ Tebes? Adɛn nti na mobɛn ɔfasu no saa?’ Ɛba saa a, ka sɛ, ‘W’akoa Uria, Hitini no nso awu.’” 22 Enti ɔbɔfo no kɔkaa asɛm a Yoab de asoma no no nyinaa kyerɛɛ Dawid. 23 Ɔbɔfo no ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Ná mmarima no ho yɛ den sen yɛn. Wopue baa yɛn so wɔ wuram hɔ, na yɛn nso yɛde guu wɔn so koduu kurow no pon ano. 24 Wɔn a wɔwɔ ɔfasu no so no totow agyan baa wo nkoa so, na ɔhene nkoa no bi wuwui; w’akoa Uria a ɔyɛ Hitini no nso wui.”+ 25 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ ɔbɔfo no sɛ: “Kɔka kyerɛ Yoab sɛ, ‘Mma asɛm yi nhaw wo, na sekan twa benkum twa nifa. Mia ɔko no mu, na di kurow no so nkonim.’+ Wokɔ a, hyɛ no den.” 26 Bere a Uria yere tee sɛ ne kunu Uria awu no, osuu no. 27 Ogyam* ne kunu wiei no, ntɛm ara na Dawid soma kɔfaa no baa ne fi, na ɔbɛyɛɛ ne yere.+ Na ɔwoo ɔbabarima maa no. Nanso ade a Dawid yɛe no, Yehowa ani annye ho koraa.+
^ Anaa “awia rekɔ anwummere mu hɔ no.”
^ Ɔno ara na wɔfrɛ no Amiel wɔ 1Be 3:5 no.
^ Ɛbɛyɛ sɛ na wayɛ bra awie.
^ Nt., “kɔhohoro wo nan ho.”
^ Anaa “ɔhene kyɛfa,” kyerɛ sɛ kyɛfa a obi de kɔma ne hɔho a obu no.
^ Anaa “Osuu.”